Pedri Iyo Ferran Torres Oo Loo Fasaxay Inay Ciyaaraan Barcelona Super Cup-ka Spain
HomeWararka CiyaarahaPedri iyo Ferran Torres oo loo fasaxay inay ciyaaraan Barcelona Super Cup-ka Spain
January 12, 2022 Wararka Ciyaaraha, Horyaalka Spain 0
Pedri iyo Ferran Torres ayaa labadoodaba loo fasaxay inay ku biiraan kooxda Barcelona Arbacada semi-finalka Spanish Super Cup oo ay la ciyaarayaan Real Madrid .
Labada qof ayaa is karantiilay ka dib markii ay soo laabteen COVID-19 oo togan waxaana la filayaa in aan la heli karin mar kale xulashada Spanish Super Cup.
Si kastaba ha ahaatee, bayaan ka soo baxay Barcelona ayaa lagu sheegay in labada ciyaaryahan ay hadda tijaabiyeen wax xun, sidaas darteedna ay xor u yihiin inay ku biiraan kooxda inteeda kale ee Saudi Arabia.
“Ciyaartoyda kooxda koowaad ee Pedri iyo Ferran Torres xaaladooda waa ok markii laga baaray PCR waxayna hadda u socdaan inay la midoobaan kooxda inteeda kale ee ku sugan Riyadh, Saudi Arabia.
Pedri ma uusan ciyaarin tan iyo Sebtember dhaawac dartiis, inkastoo uu yimid Janaayo Torres uu ku maqnaa dhaawac ka soo kabanaya jab cagta ah, sidaas darteed labada Isbaanishka ayaa weli shaki ku jiraa taam ahaanshahooda.
Torres ayaan sidoo kale ciyaarin kulan tartan ah tan iyo bishii Sebtembar, laakiin wali waxa uu dhaliyay saddex gool waxana uu diiwaan gashaday hal caawin 7 kulan oo uu u saftay Man City qaybtii hore ee ololahan.